1. မုန့်ညက်အကြောင်း ပျော်ရွှင်မှု၏ပွဲတော်နှင့်အတူ မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ pastries တွေရဲ့အနံ့ကအိမ်ကိုဖြည့်ပြီးလာမယ့်ရာသီအတွင်းနွေးထွေးတဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သို့သော်စားစရာနှင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုလှပစေသည့် pastries တွင်ပါ ၀ င်သောအရာများသည်မရှောင်လွှဲနိုင်သောနို့ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ စူပါမားကတ်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်တွင်၎င်းကိုဝယ်မည့်အစား အထူးကြည့်ရှု။ မရပါ ဒီကနေ့မှာမင်းတို့ကပြုံးရယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးဖို့မုန့်ညက်ကိုလွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြမယ်။ ထောပတ်ဆိုတာဘာလဲ
2. နို့ရည်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိကြပါစို့။ သူတို့ဟာမကြာခဏမုန့်ဖုတ်နှင့်ကိတ်မုန့်များတွင်အသုံးပြုသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ထောပတ်အမြီးအဖြစ်လူသိများ ဒါဟာထောပတ်မုန့်အောင်ကနေကြွင်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို churning ဟုခေါ်သည်။ ကျန်အရည်များသည်ထောပတ်နို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှုသည်နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါမှမဟုတ်ချဉ်သောနို့ ဥရောပလိုနေရာမျိုး ကျယ်ပြန့်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် အချို့လူများက၎င်းသည်နို့ကဲ့သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်၎င်းကိုသောက်သုံးလိုသော်လည်း၎င်းသည်အဆီမပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထောပတ်ယန္တရားများ•နို့တစ်လုံးလုံး၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသော (၂% အဆီ) နို့ကိုသုံးပါ။ •သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ်သကြားဖြူတစ်ခွက်ကဲ့သို့သဘာဝအက်ဆစ်များ။ စားပွဲတင်
3. အိမ်လုပ်ထောပတ်နို့လုပ်နည်း နို့တစ်ခွက်လျှင်သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ် vinaigrette ဇွန်း ၁ ဇွန်းလောင်းပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာရိုးရိုးသို့မဟုတ် ၂% အဆီနို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်နို့ထွက်ပစ္စည်းသည်မသင့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကအဆီကိုသုံးပြီးတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေတယ်
4. ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတူတကွမွှေပေးပါ။ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထားပါ။ နို့သေးငယ်တဲ့ဖုသို့ coagulate မှစတင်မှီတိုင်အောင်။ ကထူမှစတင်သည်အထိ အသုံးဝင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်လုပ် buttermilk လုပ်နည်း။ စူပါမားကက်မှ ၀ ယ်သူများကဲ့သို့မပြင်းထန်သောရလဒ်များကိုပေးနိုင်သည်။ သို့သော်သန့်ရှင်းခြင်းကိုယုံကြည်ပါ နှင့်အရသာကောင်းသောမိသားစုအချိုပွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးရန်ဂရုတစိုက်နှင့်ရောစပ်။
5. အိမ်လုပ်ထောပတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောမီနူး အိမ်လုပ် buttermilk ကိုသုံးသောမီနူးများစွာရှိသည်။ ထို pancakes ကိုကျော်သွန်းလောင်း, အသီးနှင့်ပျားရည်နှင့်အတူအလှဆင်။ ထို့နောက်မိသားစုတစ်စုလုံးအစာစားနိုင်သည့်ချဉ်။ ချောကျိမ့်သောအရသာရှိသောချိုမြိန်ပြီးမွှေးသောအထူးမှုန့် pancake ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
6. ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကို mashed အာလူးနဲ့ရောပြီးအသားတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပြောင်းပါ။ ကင်နံရိုးနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာဖြစ်လိမ့်မည် နှစ်သစ်ကူးအကြိုပွဲတော်အတွင်းလှပသောကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်ပါ။ ကျိန်းသေအရသာ၏အတိုင်းအတာထူးခြားတဲ့စေမည် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းကိုသင်၏မိသားစုနှင့်ကလေးများနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အိမ်လုပ်ထောပတ်များသည်သင့်အစားအစာ၏အရသာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ chic